Tronsmart ONYX PRIME, nyocha na arụmọrụ | Ozi gadget
Tronsmart ONYX PRIME, nyocha na arụmọrụ
Rafa Rodriguez Ballesteros | 26/12/2021 14:00 | General, Nyocha
Ị na-achọ ụfọdụ ekweisi ikuku? Dị ka ị hụla, nke a abụghị ọrụ dị mfe, n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ dị ugbu a na ahịa. Ya mere, iji nyere gị aka n'ọrụ nke ịchọta ezi ekweisi ikuku nke ịchọrọ, taa, anyị na-ewebata Actualidad Gadget ọhụrụ, karịa nhọrọ na-adọrọ mmasị, Tronsmart ONYX PRIME.
Anyị enweela ike ịnwale ekweisi ndị a nke Tronsmart ụbọchị ole na ole, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ahụmịhe nke ojiji anyị, njirimara anyị nwere ike ịchọta yana ọnụahịa nke ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ahọpụtara ha.
1 Mwepu Tronsmart ONYX PRIME
2 Nke a bụ Tronsmart ONYX PRIME
3 Atụmatụ ndị Tronsmart ONYX PRIME nyere
Mwepu Tronsmart ONYX PRIME
Dị ka anyị na-eme mgbe niile, anyị na-egosi gị ihe niile na anyị nwere ike ịhụ n'ime igbe nke ONYX PRIME nke Tronsmart. Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, anyị nwekwara ike ịsị na anyị ahụghị ihe ịtụnanya ọ bụla. Anyị nwere nke anyị ekweisi, nke ikpe ebubo, a manual onye ọrụ na UBS Ụdị C cable ịchaji batrị n'ime akpa ahụ.
Zụrụ ya Tronsmart ONYX PRIME na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Maka ndị ọzọ, anyị na-ahụkwa Di na nwunye nke a pad mmezi nke ekweisi, ka ọ nwee nha atọ dị iche iche, yana nke etinyere. Na mgbakwunye, anyị nwekwara abụọ ọzọ "mgbanaka rọba", nke dị iche iche nha, na-eje ozi iji nweta mma nke ekweisi n'ime ntị.
Nke a bụ Tronsmart ONYX PRIME
Tronsmart ONYX PRIME nwere usoro "na ntị", ma ha nwere a peculiarity na ha imewe na ole na ole emepụta kpebiri imeju ha ekweisi. Dịka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, ekweisi Tronsmart ndị a gosi mpe mpe akwa ntị na-arụ ụka nke na-anọgide n'ime ntị na onye ọrụ ya bụ ime mmetụta agụụ. Maka nke a anyị na-achọta nha atọ dị iche iche.
ONYX PRIME nwekwara nke ọzọ mgbanaka roba ọzọ nke ahụ dị na nsọtụ ọzọ nke igwe okwu. Na-eje ozi pnke mere na ekwentị na-edozi karịa na ntị anyị nakwa na ọ gaghị emegharị ma ọ bụ daa. Obere mgbakwunye na-eme ka ha a nhọrọ kachasị mma ọ bụrụ na ị na-achọ ekweisi ka o soro gị n'oge mmega ahụ egwuregwu. Ngwa nke anyị ahụlarị na ụdị ndị ọzọ na mgbe anyị nwalechara ya anyị nwere ike ịgba akaebe na ha mezuru ọrụ ha. Anyị nwekwara nha atọ dị iche iche ka ọ dabara nke ọma. Ha bụ ihe ị na-achọ? Nweta nke gị Tronsmart ONYX PRIME na Amazon na free mbupu.
Ekweisi nwere a kọmpat sizeHa dị obere n'aka na karịsịa mgbe anyị na-eyi ha. Ihe owuwu ụlọ, n'ime kenkowaputa plastic, na ịdị arọ nke dị nnọọ nta na-eme ka anyị ghara ịhụta na anyị yi ha. Ihe dị ezigbo mkpa maka ndị na-eji ha eme ihe ruo ọtụtụ awa ma ọ bụ mgbe ha na-egwu egwuregwu.
N'akụkụ nke dị n'èzí ntị, dị n'elu logo nke ụlọ ọrụ ahụ, na njikwa aka. Anyị nwere ike iji ha chịkwaa egwu egwu, gaa n'ihu ma ọ bụ azụ azụ, kwụsịtụ ma ọ bụ malite ịkpọghachi. N'otu mpaghara ahụ anyị na-ahụ a igwe okwu nke a ga-eji jikwaa kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ. Na n'okpuru, anyị nwere a dugara ìhè nke na-agwa anyị ma njikọ ahụ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ọkwa batrị nke isi okwu ọ bụla.
El chaja akpa, ebe ekweisi na-ezu ike maka ịchaji, a na-ejikwa plastik ojii mee ya, na nke a na njedebe matte. Igwe ekweisi dabara nke ọma maka os magnetized atụdo. Ha na-enye ruo ụgwọ atọ agbakwunyere zuru oke nke mere na nnwere onwe nke ONYX PRIME nwere ike iso anyị. Ị nwere ike ịzụta ugbu a na Amazon Tronsmart ONYX PRIME ọnụahịa kacha mma.
Atụmatụ ndị Tronsmart ONYX PRIME nyere
La nnwere onwe Ọ bụ otu n'ime akụkụ ndị anyị nwere ike ịtụle kachasị mkpa mgbe anyị na-ekpebi otu ma ọ bụ nke ọzọ. Anyị nwere mmeputakwa nke egwu gara n'ihu ruo awa asatọ maka ibu ọ bụla. Y ngụkọta nke ruo awa 40 ọ bụrụ na anyị nwere igbe nchaji.
La njikọta bụ otu n'ime ike ha ebe ọ bụ na ha nwere teknụzụ Bluetooth 5.2. Njikọ ngwa ngwa na enweghị nkebi mgbe niile. Na ekele Qualcomm 3040 mgbawa, anyị na-enweta ogo ọdịyo emelitere nke na-eme ka ahụmịhe ige ntị ka mma.
Anyị nwekwara teknụzụ True Wireless Stereo Plus emelitere. Ọ na-enwe ike ịchịkwa na oriri nke ekweisi abụọ ahụ bụ nke ziri ezi. Ma ọ na-eweta ọganihu pụtara ìhè na nkwụsi ike nke njikọ ahụ. Na-agụkwa na Nkagbu mkpọtụ arụ ọrụ karịa iji mgbawa QCC3040 na-enye ahụmịhe onye ọrụ na-eju afọ nke ukwuu.
La ogo dị mma Ha na-enye n'elu atụmanya.
Onwe ya ruo awa 40 na-enweghị mkpa plọg.
Imebe zuru oke maka egwuregwu .
Size nke chaja akpa na ekweisi karịa nkezi.
La roba mmezi Ọ nwere ike ghara iru ala, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa na nha ahụ ziri ezi.
Ihe na: December 26 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: December 25 nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Tronsmart ONYX PRIME, nyocha na arụmọrụ
Elite 3, nhọrọ dị ọnụ ala nke Jabra, na-ejigide ịdịmma [Nyocha]